Manchester United oo Baraha Bulshada ka Bilaawday Tartankan Qosol leh Kaddib markii ay soo Bandhigtay SAWIRRADA Pogba Matic iyo Valencia Toban sano ka hor…Xitaa SOMAALI ayaa ku Biirtay Loolankaa – Gool FM
( Manchester ) 16 Jan 2019. Manchester United ayaa baraha bulshada kusoo bandhigtay sawirro todoban sano ka hor xiddigaheeda Paul Pogba, Nemanja Matic iyo Antonio Valencia midaa oo tartan xoogan ka bilaawday Social Media.
Seddax sawirr ayaa qosol lahaa is barbardhigooda, iyadoo arinka Man United uu loolan xoogan ka abuuray baraha bulshada, waxaana la arkay kumanaan ciwaan oo soo bandhigay sawirradooda 10-sano kahor.
Sawirrka ugu horreeya ayaa waxaa laga soo qaaday ninka qadka dhexe Pogba, kasoo xilligaa kamida ahaa kooxda da’yarta iyadoo uu ka muuqdo is badal weyn oo dhanka tinta ah todoban sano ka hor.
Wuxuu ku biiray kooxda Old Trafford bishii July 2009, Pogba ayaana ka tagay naadiga seddax sano kaddib markii uu kaliya cayaaray todoba dheel.
Dib ayuu ugu soo laabtay markii lagula soo wareegay rikoodh lacageed oo dhan £89-Milayn sanadkii 2016, isagoo hadda ah kan ugu muhiimsan kooxda Ole Gunnar Solskjaer lixdii kulan ee lasoo dhaafay.
Nemanja Matic ayaa sido kale lasoo xulay sawrikiisa, isagoo ninka qadka dhexe ee reer Serbian uu xilligaa xirnaa maaliyada xulka qaranka isbadal weyna uu ka muuqdo.
10-sano ka hor, Matic ayaa u dheelay Kosice, Chelsea oo laba kolla iyo Benfica ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxdiisa haatan ee United 2017.
Waa cayaariyahanka kaliya ee seddax koox u dheelay inta lagu guda jiray 10-kii sano ee lasoo dhaafay. Antonio Valencia, kasoo ay United £16-Milyan kala soo wareegtay Wigan bishii June 2009 ayaa sawirrka seddaxaad laga soo xulay inkastoo isagu uusan ka muuqan isbadal weyn wuxuuna kooxda u saftay 338-cayaar.
Sheekada Then and Now ee Markaa iyo hadda ayaa tartankeeda wuxuu aad u qabsaday Baraha Bulshada oo xitaa Somalida ayaa qeyb ka noqotay kuwaa oo Barta Facebook kusoo bandhigay sawirradooda 10-sano ka hor iyo waqtigaan.
Juan Mata oo si adag kala taliyay Isco, dhibaatada u dhexeysa isaga iyo tababare Solari